सडक कि रेल ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २८, २०७६ सुजित मैनाली
दुईदिने नेपाल भ्रमण सिध्याएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्किएसँगै नेपाल–चीन सहकार्यको प्रारूप अब कस्तो हुनेछ भन्ने अझ स्पष्ट भएको छ । सीको भ्रमणका क्रममा शिक्षादेखि व्यापारसम्मका विषयमा दुई देशबीच सहमति भए ।
यति हुँदाहुँदै पनि भ्रमण कस्तो रह्यो भनी निर्क्योल गर्ने मानक दुई देशलाई जोड्ने यातायात पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी विषयमा भएको सहमतिलाई मानिएको छ । सीको भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र दुई देशलाई जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा पनि केन्द्रित हुने सहमति जुटेको छ । यी दुई विषय आगामी केही महिनासम्म चर्चामा रहिरहने स्पष्ट छ ।
नेपाल र चीनबीच बाटोघाटो बनेपछि दुई देशको सम्बन्ध सघन बनेको इतिहासले देखाउँछ । लिच्छवि कालअघि नेपाल–चीन सडक सञ्जालको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा प्रमाण अभावका कारण ज्ञात हुनसकेको छैन । लिच्छवि कालमा राजा नरेन्द्रदेवको पालामा आएर नेपाल र चीन जोड्ने बाटो सहज भएको संकेत मिल्छ । तिब्बती वंशावलीहरूमा उनको पालादेखि बौद्ध भिक्षु र चिनियाँ राजप्रतिनिधिहरू नेपालको बाटो हुँदै भारततिर गएको विवरण छ । इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार त्यसअघि चीनबाट भारत अथवा भारतबाट चीन जान मध्य एसियाको घुमाउरो बाटो समात्नुपर्थ्यो अथवा डुंगामा पूर्व समुद्रको बाटो लाग्नुपर्थ्यो । नरेन्द्रदेवको पालामा नेपालको उत्तरी नाका सम्भवतः सहज तुल्याइयो, जसकारण नेपाल हुँदै आवत–जावत गर्न चीन र भारतका मानिसलाई सहज भयो ।
नरेन्द्रदेवले आफ्ना एकजना छोरामार्फत चिनियाँ बादशाहकहाँ सौगातसमेत पठाएका थिए । यसका अतिरिक्त उत्तर भारतका राजा हर्षवर्द्धनको मृत्युपछि हर्षको राज्यविरुद्ध दुई देशबीच सैन्य सहकार्यसमेत भयो । सडक र नाका सहज भएसँगै चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध सघन भएको थियो । दुई देशबीच सहज यातायात भएमा द्विपक्षीय व्यापार–वाणिज्य फस्टाउँछ । यसबाट दुई देशका नागरिक बीचको अन्तरक्रिया सघन हुन्छ । दुई देश बीचको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध फराकिलो बन्छ भन्ने इतिहासले देखाएको छ ।
नेपालसँगको सम्बन्धमा यही कुरा हासिल गर्ने मनस्थिति चीनले पछिल्लो समय बनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित राजकीय भोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउने, दुई देशबीच बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोल्ने र नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बन्न मद्दत गर्ने बताएर चिनियाँ मनस्थिति स्पष्ट पारिसकेका छन् । यस विषयमा दुई देशबीच सम्झौतासमेत भइसकेको छ । चीनले नेपालसँग सडकसँगै रेलमार्गमार्फत समेत जोडिने चाहना स्पष्ट पारिसकेको छ । चीनको यस्तो चाहनालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा हामी अझ स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
नेपालको अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी क्षेत्रले ओगट्नु नेपाल विपन्न रहिरहनुको एउटा प्रमुख कारण हो । मैदानी भूभाग मलिलो हुन्छ । त्यहाँ विकास–निर्माणका काम गर्न सहज हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हिमालको प्रतिकूल भूगोलले नेपाललाई एउटा असाध्यै ठूलो पुँजी उपलब्ध गराएको छ । त्यो हो– चीनसँग जोडिएका सुगम नाका । यसलाई पहिचान गरेर सदुपयोग गर्नसके राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकसाथ हासिल गर्न नेपाललाई किञ्चित अप्ठेरो पर्ने छैन ।
लिच्छवि कालका अभिलेखहरूले त्यतिबेला तिब्बत र चीनसँग भन्दा भारतसँग नेपालको व्यापार बढ्ता थियो भन्ने देखाउँछ । मल्लकालसम्म आइपुग्दा यसमा परिवर्तन भयो । भारतसँगको नेपालको व्यापार क्रमशः घट्यो र तिब्बतसँगको व्यापार विस्तार भयो । तिब्बत र काठमाडौं दुवैतिर मानिने बौद्ध धर्म र थप सहज बनाइएका हिमाली नाकाका कारण तिब्बतको व्यापारमा एकाधिकार कायम गर्न नेपाली व्यापारी सफल भए । तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चल्न थाल्यो । तिब्बतसँगको नेपालका सहज नाका र ल्हासा र अन्य तिब्बती बजारमा कोठी जमाएर बसेका नेवार व्यापारीहरूका कारण भारतीय व्यापारीहरूले पनि तिब्बतसँग व्यापार गर्न काठमाडौंलाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाउनुपर्‍यो । ती व्यापारीबाट कुत असुलेर काठमाडौंले मनग्ये कमायो । अमेरिकी लेखक लियो ई. रोजका अनुसार १७ औं शताब्दीमा ल्हासालाई राजधानी बनाएर तिब्बतमा बलियो राज्यको उदय भएपश्चात भारत र चीन बीचको नाकाका रूपमा नेपालको महत्त्व अझ बढ्यो ।
भारतमा अंग्रेजहरूको उपनिवेश स्थिर हुँदै गएपछि कुती र केरुङ नाकासम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अंग्रेजहरूले सैन्य अग्रसरता लिए । गोरखा र काठमाडौं बीचको युद्धमा काठमाडौंको पक्ष लिएर लड्न इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो सेना पठायो । तर युद्धमा गोरखासँग काठमाडौं पराजित भयो । त्यसपछि तिब्बतसँगका अन्य नाका
खोज्न अंग्रेजले काठमाडौं पूर्वतिर आँखा डुलायो । तर चौदण्डी र विजयपुरलाई पनि अधीन गरेर गोरखाले नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा नदीसम्म विस्तार गरेपछि तिब्बतसँगको व्यापारिक नाका हात पार्ने अंग्रेजको प्रयत्न असफल भयो ।
नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि मेची नदीपारिको नेपाली भूभाग भारतस्थित बेलायती उपनिवेशमा गाभियो । त्यसपछि अंग्रेजहरूले सिक्किमको नाथुला नाका सञ्चालनमा ल्याएर त्यही नाकामार्फत तिब्बतसँग व्यापार गर्न थाले । नाथुला नाका खुलेपछि भारत र तिब्बत/चीन बीचको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनेर सहज आम्दानी गर्ने नेपालका दिन समाप्त भए । सयौं वर्षदेखि नेपालले उठाउँदै आएको लाभ त्यसछिका दिनमा कालिम्पोङ र सिक्किमको पोल्टामा गयो ।
नाथुला नाका खुलेपछि नेपालको हातबाट उम्किएको आर्थिक अवसर नियतिले पुनः नेपालकै पोल्टामा हालिदिन खोजेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को बृहत्तर योजना अन्तर्गत रहेर चीनले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन र त्यसलाई प्रकारान्तरमा भारतसम्म पुर्‍याउन चाहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चीनको भन्दा विपरीत धार र स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतले बीआरआईलाई अझै स्वीकारेको छैन, जसकारण चिनियाँ दृष्टिमा नेपालको महत्त्व अझ बढेको छ । नेपाल आउनुअघि कान्तिपुरमा विशेष आलेख लेखेर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ‘दक्षिण एसियामा चिनियाँ नागरिकहरूको छनोटको पहिलो गन्तव्य देश’ उल्लेख गरी त्यसको संकेत गरिसकेका छन् । यसो भनेर उनले चीन र दक्षिण एसिया बीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा नेपालको उदय होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा पुनः विकसित हुन इतिहासले दिएको यस्तो दुर्लभ अवसरलाई उपयोग गर्नबाट नेपाल चुक्नु हुँदैन ।
आकार दिने समय
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अभिवृद्धि गर्दै चीनसँगको सम्बन्धमा ठूलो फड्को मार्न खोज्दा विपरीत धारका अभिव्यक्तिहरू यसअघि पनि नेपालभित्रै सुनिएका थिए । अहिलेको ‘सडक कि रेल’ भन्ने बहसले त्यही इतिहासको स्मरण फेरि एकपटक गराएको छ । सन् १९६० ताका चीनले नेपालसँग कोदारी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाल भ्रमणका क्रममा आफ्ना नेपाली समकक्षी बीपी कोइरालासमक्ष सर्वप्रथम यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । बीपीको चीन भ्रमणका क्रममा चाउसँगै अध्यक्ष माओले पनि त्यही प्रस्ताव दोहोर्‍याएका थिए । तर देशभित्रै सडक सञ्जाल विस्तार गर्न नेपाल केन्द्रित छ भनेर बीपीले चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । बीपीको त्यस्तो निर्णय चिनियाँहरूले भारत विरुद्ध लक्षित रहँदै रणनीतिक उद्देश्यले कोदारी–काठमाडौं सडक बनाउन खोजेका हुन् भन्ने बुझाइबाट निसृतः थियो । आफ्नो यस्तो बुझाइबारे बीपी स्वयंले एउटा अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेका छन् ।
नेपाल–चीन सडक सञ्जाल सम्बन्धी बीपीको विश्लेषण नेपाली आकांक्षाको ठिक विपरीत थियो । बीपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री पदमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यले तिब्बत–काठमाडौं सडक निर्माण गर्न बजेट छुट्याएका थिए । उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटेर केआई सिंह प्रधानमन्त्री बनेपछि सडक निर्माणको योजना तुहिएको थियो । सुनिए अनुसार आचार्यलाई तिब्बत र काठमाडौं जोड्ने सडक निर्माणमा अग्रसर हुन तिब्बतसँग व्यापार गर्दै आएका काठमाडौंका व्यापारीले उत्प्रेरित गरेका थिए । राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी बीपी सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि कोदारी राजमार्ग निर्माणबारे दुई देशबीच निर्णायक सहमति जुट्यो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले कोदारी सडक निर्माण गरिदियो ।
अहिलेजस्तै त्यतिबेला पनि चीन नेपालसँग यातायात सञ्जाल विस्तार गर्न इच्छुक थियो । भारतसँगको उसको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो । यति हुँदाहुँदै पनि तिब्बत–काठमाडौं सडकप्रतिको चिनियाँ अभिरुचि नेपालको बृहत्तर हितसँग बाझिएको थिएन । अहिलेको अवस्था पनि करिब–करिब उस्तै छ । चीनले अघि सारेको बीआरआईको जवाफ प्रतित हुनेगरी अमेरिकाले पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अघि सारेको छ । यसमा नेपाललाई समावेश गर्ने प्रयत्न अमेरिकाले तीव्र बनाएको छ । यस भेगको भूराजनीतिमा आइरहेका यस्ता खालका बदलावलाई ध्यानमा राखेर चीनले पछिल्लो समय ‘पेरिफेरियल पोलिसी’ तर्जुमा गरेको छ । यही नीति अनुरूप उसले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सघन बनाउन खोजिरहेको छ । यी सबै बुझाइको समष्टि हो– नेपाल र चीनलाई रेल तथा सडकमार्फत अझ घनिभूत रूपमा जोड्न सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धता ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले रेलमार्फत चीनसँग जोडिन नेपालसामु अनुकूल अवसर उपस्थित गराएको छ । ठिक यही समय नेपालमा स्थिर सरकार विद्यमान छ । नेपाल–चीन कनेक्टिभिटीलाई आकार दिने नेपालका लागि यो अत्यन्तै दुर्लभ अवसर हो । यो ‘रेल वा सडक’को बहसमा अल्झिएर ऊर्जा खेर फाल्ने समय होइन । बरु ती सबै ऊर्जालाई एकमुष्ठ रूपमा चीनसँगको रेल र सडक सञ्जाल विस्तारमा केन्द्रित गर्ने अवसर हो । फलाम तातेको बेला घन बजार्न सकियो भनेमात्र फलामले आकार लिन्छ । अहिले उपस्थित भएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न चुके समय घर्किन सक्छ । बीआरआईलाई लिएर चीन र भारतबीच सहमति जुट्यो भने त्यसको बाछिटाले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्ने नेपाली सपनामा पानी छ्याप्ने सम्भावना पनि छ ।
रह्यो, रेल बनाउँदा चिनियाँ ऋणको गलपासो लाग्ला भन्ने चिन्ता । दुई देशबीच राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहकार्यको चाहना तीव्र छ भने रेलमार्ग निर्माणको आर्थिक मोडालिटी तपसिलको विषय बन्न जान्छ । आर्थिक मोडालिटीमा छलफल प्रवेशै नगरेको अहिलेको सन्दर्भमा ‘ऋणको गलपासो’ सम्बन्धी चर्चाको नियत निको देखिँदैन । यो ‘अहिले सडक बनाऔं, रेल होइन’ अथवा ‘चीनसँग रेलबाट जोडिनु अघि भारतसँग सल्लाह गरौं’को भाष्यकै अर्को रूप हो । रेलको प्रसंगलाई विषयान्तर गरेर समय घर्काउनु यी भाष्यको प्रयोजन प्रतित हुन्छ । कुनै बेला नेहरूले चिनियाँ नेताहरूसँग ‘चीनले नेपालमा दूतावास खोल्नु हुँदैन, नत्र अमेरिकाले पनि खोल्छ र चीनलाई गाह्रो पर्छ’ भनेका थिए । चीनसँग रेलमार्ग निर्माण गर्ने दिशामा अहिले अग्रसर हुनुहुँदैन भन्ने भनाइले फेरि एकपटक नेहरू अझिव्यक्तिको अन्तर्य स्मरण गराएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:३६
आश्विन २८, २०७६ सरिता तिवारी
गत असोज ११ गते चितवनको एउटा अन्तरक्रियामा वक्ताका रूपमा आमन्त्रित नेता चित्रबहादुर केसी यसो भन्दै थिए । पंक्तिकारले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रमका अर्का वक्ता थिए, प्रेम रिमाल । रिमाल चितवनको बौद्धिक वृत्तमा वचन र कर्म दुबैले सांस्कृतिक रूपान्तरणको इमान राख्ने आँटिला व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । वर्तमान कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको सान्दर्भिकता खोजिएको त्यस बहसको आयोजक थियो— प्रगतिशील लेखक सङ्घ, चितवन शाखा ।
दुई सय बढी सहभागीले खचाखच हलमा अधिकांशतः कम्युनिस्ट स्कुलिङका मानिसहरू थिए । सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा अनेकौंपल्ट प्रशिक्षण लिएका, बहस गरेका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता ! तर सत्ताधारी नेकपातर्फका सहभागी भने अति कम थिए । सत्तानिःसृत खान्की सोहोर्ने, नेतागणको चाकरी गर्ने व्यस्तता छोडेर यस्ता बहसमा आइरहने फुर्सद तिनलाई कहाँ हुनु ?
भौतिकवादी, विज्ञानसम्मत, स्पष्ट चिन्तन । सादा, नैतिक, समतावादी कर्म । यी दुई कुराले सुसज्जित मानिस कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने मानिन्छ । संस्कृति र आचार व्यवहारमा क्रमिक विकास (इभोल्युसन) होइन, क्रान्तिकारी छलाङ (रिभोल्युसन) हुनेगरी व्यक्ति र समाजको संस्कार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने दीक्षालाई जीवनको न्युनतम आदर्श मान्ने र व्यवहारमा पनि चरितार्थ गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन्छन् । व्यक्तिगत हितभन्दा सामूहिक हितलाई सर्वोपरी राखेर जीवनलाई जनवादी, समाजवादी आदर्शले चलाउने मानिसहरू कम्युनिस्ट हुन्छन् । यो कुरो मार्क्सवादी पाठशालाको आधारभूत सिकाइ हो । यो अर्कै कुरा हो कि नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न चाहने ठूलो पंक्ति अहिले कम्युनिस्ट आदर्शबाट पूर्णरूपले च्युत भैसकेको छ, तथापि ऊ आफूलाई कम्युनिस्ट नै भनाइरहन चाहन्छ ।
तै, चितवन प्रलेसले यतिको पहल गर्‍यो । किनभने बहस थाल्नै पनि अलिबेर घोरिएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । एक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा छलफल गर्ने नैतिक हैसियत र रुचि दुबै भएका नेता वा बौद्धिक पाउनै मुस्किल ! छातीमा हात राखेर वचन र कर्मको सन्तुलन देखाउन सक्ने सत्पात्र भेटाउनै मुस्किल ! दुई, सत्तासुखको लुतो कन्याइमा आस्वाद लिइरहेका कार्यकर्ता र तथाकथित बुद्धिजीवी जमातबाट यस्तो बहसमा सहभागी बन्ने मानिसहरू जम्मा गर्न झनै मुस्किल । कतिपयलाई यस्ता छलफल पूरै वाहियात र बेकामे लाग्छन्, किनभने ती अब पार्टीहरू, नेतृत्व र तिनका गतिविधिसँग पूर्णरूपले निराश भैसकेका छन् । बाँकी केही पहुँचवाला छन् । ती हरदम सत्ताधारीको वरिपरि रिँगेर तिनको प्रशस्ति गर्दै एकबारको जिन्दगी बिताउन व्यस्त छन् । उनीहरूसँग ठेक्का, कमिसन र दलालीको भ्याई–नभ्याई माचो छोडेर यस्ता ठाउँमा झुल्किने जाँगरको अपेक्षा गर्नु एउटा ठूलो दुःख पाल्नु हो । त्यसैले रिमालजीले व्यंग्यकै भाषामा भने, ‘जो स्वस्थ छन्, तिनलाई दबाइको खाँचो नै थिएन । रोगीहरू बाहिरै छुटेर गरिएको बहस कति सार्थक होला ?’
चितवनमा यस्तो बहस चलिरहँदा काठमाडौंका अखबार र अनलाइन पोर्टलहरू कृृष्णबहादुर महराका कारनामा छाप्न व्यस्त थिए । यौनजन्य अपराधको स्क्यान्डलमा बहालवाला सभामुख ! पत्याउन असजिलो लागे पनि यो खबर असत्य सावित भएन । त्यसयता पीडितमाथि गरिएको दबाब र नियन्त्रणको खेल ! यसपछि झनै कुरूप बनेर उदाङ्गिएको पार्टीसत्ताको नैतिक धरातल । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा न यो पहिलो प्रकरण थियो न अन्तिम नै । कांग्रेस वा अन्य पार्टीभित्रका यस्ता किस्सासँग त जोकोही अचम्भित हुनछोडेको वर्षौं भैसकेको छ । कम्युनिस्टहरूसँग न्यूनतम सदाचार र नैतिकताको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक थिएन । तर कम्युनिस्ट भनेका पनि कुनै अद्भुत र अपूर्व पात्र होइन रहेछन् । कामना, तिकडम, षड्यन्त्र र सत्ताभोगको निर्लिप्ततामा घाँटीसम्म डुबेका यही लोक र समाजका पुरुष (र सायद स्त्री पनि) त्यहाँ पनि उत्तिकै छन् भन्ने कुरा महरा प्रकरणले एकपल्ट फेरि सावित गरेको छ ।
निजी सम्पत्ति जम्मा गर्ने, विलासी जीवन बिताउने, सुखसयल, मोजमस्ती आदि गतिविधिको विरोध गरेर ‘वर्ग शत्रु सफाया’ गर्दै निम्न र मध्यमवर्गीय जनताका माझमा लोकप्रिय बनेका कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूको नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मको आजको जीवनशैली हेरौं । तिनको खानपान, बोली र व्यवहार हेरौं । तिनको उठबस र सङ्गत हेरौं । ती कुन कोणबाट कम्युनिस्ट लाग्छन् ? नेपाली अनुभवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन केवल संसदवादी सत्तारोहणको एउटा चिप्लो तर्कभन्दा बढी हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता र समर्पणको मात्रै अभाव हो या सांस्कृतिक रूपले नै ठूलो फट्याइँ र मजाक भइरहेको हो ? यसको अन्तर्य बुझ्नु जरुरी छ ।
अपवादलाई छोडेर नेपालको कम्युनिस्ट नेतृत्व सांस्कृतिक रूपले सुरुदेखि नै वास्तविक अर्थमा कम्युनिस्ट बन्न प्रतिबद्ध थिएनछ भन्ने यतिखेर छर्लङ्ग भैसकेको छ । सिद्धान्तको विचलन वास्तवमा व्यवहारमै घटित भएको पलायनको रूप हो । यद्यपि यहाँ सिद्धान्तको दाम्लोले बाँधिएर विचारलाई धर्मशास्त्रजस्तो बनाउनुपर्थ्यो भन्न खोजिएको होइन ।
कम्युनिस्टहरूले राम्रो लगाउन, मीठो खान र सुविधा भोग्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । तर विचारको विज्ञान र त्यसप्रतिको निष्ठालाई धुलिसात पारेर सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्ने हो भने कम्तीमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्न छोड्नुपर्छ भन्नेचाहिँ स्पष्टै हो । माफिया र दलाल वर्गसँग घाँटी जोडेर आफैंले हिँडेको बाटो र जनता दुबैलाई धोका दिने नेतृत्व अरु कहाँ–कहाँ चुक्दै जान्छ भन्ने हिसाब–किताब गर्न गाह्रो छैन । नेतृत्वको पलायन र विचलनको शृङ्खला केशरजङ्ग रायमाझीदेखि आजसम्म आइपुग्दा विकराल र बदनाम भैसकेको स्पष्ट छ । इतिहासका कतिपय विचलन वैयक्तिक स्तरका भएरै पनि धेरै आलोचित थिए । तर पछिल्ला दशकमा देखिएका विघटन र स्खलन सामूहिक चरित्रका छन् । कसले कसको आलोचना गर्ने ? कसले कसलाई सच्याउने ? यस्ता स्खलनले बनाएको खाडल अपूरणीय छ ।
सांस्कृतिक पतन र ध्वस्तीकरणको चित्र यति डरलाग्दो छ कि कम्युनिस्ट पार्टीबाट मनोनित राष्ट्रपति र विगतका महारानीको शाही आडम्बरमा रौंबराबर भिन्नता देखिन्न । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको चकचकी र शासकीय दम्भ यसरी प्रकट हुन्छ कि त्यसले जनविरोधी, सामाजिक न्यायविरोधी राजनीतिक अपराधीकरणलाई मलजल गर्न बाहेक उल्लेख्य प्रगति गरेकै देखिन्न । सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ता र बुद्धिजीवी पंक्तिमा पनि कम्युनिस्ट आदर्श र संस्कारका न्यूनतम मूल्यको रक्षा गर्न नेतृत्वलाई चुनौती दिने आँट र सरोकार दुबै कत्ति पनि देखिन्न । यसमा शक्ति, सत्ता र पद–पीठको भोक बाहेक अरु कुनै चिन्ता देखिन्न । यो पंक्ति झन् हदैसम्मको निकम्मा र सत्ताको पुच्छर भएर स्खलनको भीरमा अड्केको छ । यसले आफू स्वयम्लाई उद्धार गर्नसके धन्य !
संस्कृति भनेको केवल चाडबाड र नाचगान मात्रै होइन । जीवन चलाउने संस्कार र चलन मात्रै पनि होइन । संस्कृति भनेको उठबस, वाणी, व्यवहार र समग्र जीवनशैली हो ।
जीवनपर्यन्त मानवीय मर्यादा र चरित्रको अभिव्यक्ति हो । त्यति मात्रै होइन, संस्कृति समाजको अमूर्त र घुमाउरो रूपको राजनीति पनि हो । समाजका कतिपय संरचनागत विभेदजन्य राजनीतिलाई आन्तरिक रूपले र जरैदेखि बदल्न संस्कृतिको रूपान्तरण जरुरी छ भन्ने यथार्थ आत्मसात गरेरै कम्युनिस्ट चिन्तकहरूले समाजवादी संस्कृति निर्माणको तर्क गरेका हुन् । उनीहरू संस्कृतिको रूप आत्मिक ज्यादा देखिए पनि यसको निर्माण भौतिक उत्पादनका आधारमा हुन्छ भन्छन् । समाजको अर्थ–राजनीतिक बदलावले संस्कृतिमा परिमार्जन र परिवर्तन हुन्छ भन्छन् । त्यसरी हेर्दा समाजको आर्थिक/भौतिक संस्कार शिष्ट र मर्यादित हुनसके संस्कृति पनि संगठित र मर्यादित हुने कुरा स्पष्ट छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट नेतृत्वको रुचि राजनीतिक क्रान्तिमा मात्रै सीमित भयो । तिनले न अर्थराजनीति बदले न देशको भिखमागा चरित्रमा सुधार ल्याए न माफियातन्त्र र भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आयो । व्यवस्थाको नाम फेरिदिएपछि पूरै पद्धति फेरिएको भ्रम बेचेर ती सत्तासीन भए । आफूले पछ्याएको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लत्याएर ती नवसामन्तमा फेरिए । नयाँ राजा बने, नयाँ रानी बने । केवल पुराना शासक फालिए, फेरि उही र तीभन्दा पनि बेइमान चरित्रका शासक स्थापित भए । यसले सांस्कृतिक भ्रष्टीकरणलाई संस्थागत गर्न अझै बल पुर्‍याइरहेको छ । कम्युनिस्ट नामधारीहरूकै भयावह रूपको यो स्खलन र पतनले सांस्कृतिक रूपान्तरण केवल एक भद्दा र क्रूर व्यंग्य बनिरहेको छ ।
अहिले पनि दसैंको टीका बहिष्कार गरेर, जनवादी, अन्तरजातीय वा साधारण शैलीको विवाह गरेर, बाबुआमाको काजकिरिया नगरेर इत्यादि तरिकाले नेपाली कम्युनिस्टहरूले आफूलाई प्रगतिशील सावित गर्ने गरेका छन् । तर यो केवल तदर्थ रूपान्तरण हो । खालि ‘टेक्निकल’ कुरा हो । दसैं वा काजकिरिया बहिष्कार गर्ने तर अवसर पाए जस्तोसुकै अनैतिक, अमर्यादित काम गर्न पछि नपर्ने हो भने नाम मात्रका क्रान्तिकारी (रिभोल्युसनरी) बन्नुभन्दा नैतिकवान सुधारवादी (इभोल्युसनरी) बन्नु नै बरु ठीक हो । जनवादी विवाहको वकालत गर्ने तर श्रीमती, छोरी, बुहारीलाई ज्यानले धान्नै नसक्नेगरी गहनाले पुर्न सक्दा प्रतिष्ठाको चुलीमा पुगेको महसुस गर्ने ‘हिपोक्रेसी’ रहँदासम्म रूपान्तरणको अभ्यास प्राविधिक र देखावटी नाटकभन्दा बढी हुन सक्दैन ।
प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:३२